Koodhka 'CodePen', waad ku beddeli kartaa aragtidaada haddii aad jeceshahay in muraayaduhu bidixda, midigta, ama hoose ka noqdaan markaad shaqayso… ama aad ku eegto HTML tab cusub. Aragtida dhinac-dhinac ah waxay si aad ah oofiican ugu shaqeysaa si loo tijaabiyo dejimahaaga jawaabta ah maadaama aad hagaajin karto cabirka lebbiska la arki karo.
Waad u abaabuli kartaa mid kasta oo ka mid ah qoraalladaada qorista Qalinka, ku dar iyaga Mashaariic (tifaftire faylal badan leh), ama xitaa dhisi kara uruurinta. Asal ahaan waa goob shaqo oo loogu talagalay koodhka dhamaadka-dhamaadka halkaas oo aad la socon karto qorayaasha kale, fargeeto mashaariicda kale ee guud ee la wadaago ee adiga kuu gaar ah si aad wax uga beddesho, iyo xitaa inaad barato sida loo sameeyo waxyaabo xiiso leh iyada oo loo marayo caqabadaha.
Waxaan kugu dhiiri galin lahaa inaad isqorto. Waxaa lagugu qori doonaa emaylkooda toddobaadlaha ah sidoo kale waxaad ku dari kartaa quudintaada quudinta RSS si aad u aragto qalimaanta cusub ee la daabacay. Iyo, haddii aad bilowdo raadinta ama daalacashada qalimaanta dadweynaha halkaas, waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah mashaariicda cajiibka ah… isticmaaleyaashu waa kuwo karti badan!
Raac Douglas Karr on Codepen
Nooca la bixiyay, CodePen Pro, wuxuu bixiyaa tan astaamo dheeri ah oo loogu talagalay hagaajinta shaqooyinka ama kooxaha - oo ay ku jiraan iskaashiga, geeddi-socodka, martigalinta hantida, aragtiyada gaarka loo leeyahay, iyo xitaa mashaariicda la geeyay boggaaga ama subdomain. Iyo, dabcan, CodePen waxay ku siisaa bakhaar aad u weyn isdhexgalka Github halkaasoo kooxdaada oo dhan ay ka shaqeyn karaan. Haddii aad rabto inaad tijaabiso lambar fudud sida aan ahay, CodePen waa aalad qiimo badan.